Sida saxda ah ee taayirada loo kaydiyo
1. Ku calaamadee taayir kasta
Ka hor inta aanad taayirada ka saarin baabuurka, hubi inaad calaamadiso mid kasta oo ka mid ah taayirada. Xilliga soo socda, waxaad si fudud ugu beddeli kartaa meelahooda oo waxaad ka fogaan kartaa xirashada dhicis sababtoo ah xirashada aan sinnayn ee tumanka.
Ku qor taayirada adigoo ku dhejinaya calaamad, tamaashiir ama dhejisyo dhejis ah, taas oo muujinaysa taayirada ay ku socdeen. Tusaale ahaan, LP, bidixda hore, RZ, dhabarka midig, iyo wixii la mid ah. Haddii aad isticmaasho daboolo kaydinta gaarka ah, badanaaba waxay leeyihiin calaamado u dhigma. Xaaladdan oo kale, waxa ugu weyni maaha in la jahwareeriyo.
2. Taayirada ka nadiifi wasakhda
Dhib ma laha haddii aad taayirada ku kaydinayso saxanka iyo la'aanta, marka hore waa in la hagaajiyaa. Iyo dhibicda halkan waa ka fog kaamilonimada, laakiin xaqiiqda ah in soo-gaadhista dheeraadka ah ee walxaha naaxinta ee wasakhda, dhagxaanta dhagxaanta iyo walxaha kale ee ajnabiga ah waxay waxyeelo u geysataa tumanka waxayna dardargelisaa gabowga caagga ah.
Qaado burush aan dhab ahayn oo ka maydh dhammaan boodhka, hadhaaga milixda iyo wasakhda kale ee ku ururtay godadka lagu tumanayo. Ka eeg dusha sare ee taayirka goynta qoto dheer iyo dildilaaca. Ka saar furayaasha, cidiyaha iyo dhagxaanta isku xidhan.
Qalaji taayirada ka dib daaweynta biyaha si ay dhammaan qoyaanku gebi ahaanba u baxaan. Haddii kale, caaryada ayaa laga yaabaa inay ku sameysmaan taayirka, iyo xarumaha daxalka ee cirifka.
Ha iloobin inaad soo celiso calaamadaha haddii ay dhaqdaan!
3. Dhig taayirada daboolka
Si loo ilaaliyo sifooyinka caagga, waxaa habboon in la daboolo taayirada si looga ilaaliyo iftiinka qorraxda iyo qoyaanka sare. Dabool ahaan, labada ikhtiyaar ee gaarka ah ee la iibsaday iyo bacaha caadiga ah ama filimada cuntada ayaa ku habboon.
Daboolka duntu waxay ka samaysan yihiin walxo neefsasho leh oo u oggolaanaya hawadu inay wareegto. Haddii aad mid leedahay, kaliya dul saar taayiradaada. Markaad dhisaysid ka hortag degdeg ah oo ka yimaada bacaha ama filimada, ka tag daldaloolo yar yar si aad u hubiso hawo dabiici ah. Haddii kale, uumigu wuxuu ku dhex abuurmi karaa taayirada.
4. Dooro meel
Meelna kuma kaydsan kartid taayirrada. Sida ku cad GOST R 54266-2010. Taayirada pneumatic. Baakadaha, gaadiidka iyo kaydinta, kuwaas oo nidaaminaya maaraynta dhammaan noocyada taayirada, waa in lagu kaydiyaa qolal leh heerkul u dhexeeya -30 ilaa +35 ° C iyo huurka 50-60%. Iyo sidoo kale ka fog kuleyliyeyaasha, shidaalka iyo saliidaha iyo aaladaha soo saara ozone.
Xaaladaha guriga, cadowga ugu weyn ee caag, shucaaca ultraviolet. Fallaadhaha qorraxdu way qallajiyaan maaddada, taas oo yaraynaysa bartinimadeeda waxayna keenaysaa dillaac. Qoyaanka sare sidoo kale waa khatar, laakiin marar dhif ah ayaa laga helaa nolol maalmeedka. Ma aha sidaas u adag in dahaarka laga keeno weelasha saliidda, shidaalka, dareeraha iyo kiimikooyinka kale.
Doorashada ugu fiican waxay noqon doontaa garaash, haddii ay jirto hawo wanaagsan, qolka hoose ayaa sameyn doona. Balakoonka ayaa ah kan ugu yar ee la doorbidi karo, laakiin haddii aysan jirin waddo kale, ka dibna ugu yaraan si kalsooni leh uga ilaali taayirada qorraxda.
5. Dhig taayirada meesha saxda ah
Marka lagu daro kaydinta taayirada, meelayntoodu waxay sidoo kale ka ciyaartaa door muhiim ah. Waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo loogu talagalay meeleynta saxda ah ee taayirada, iyadoo ku xiran haddii ay ku yaalaan geesaha iyo in kale.
Taayiro saxanno leh
Dhig taayirrada la soo ururiyey dusha fidsan oo isku xidhan oo midba midka kale ku yaal. Ma dul dhigi kartid shay, adigoo isticmaalaya miiska ama istaaga. Haddii aysan jirin meel bannaan oo ku filan, ku dheji taayirada derbiyada, iyaga oo ku dheji dhejisyada cidhifyada saxannada. Labada xaaladoodba, ka dhig taayirrada, adigoo cadaadiska ku yareeya ilaa kala badh.
Taayiro aan lahayn geeso
Haddii aadan haysan qayb labaad oo saxan ah oo aad ku kaydiso taayirrada xaalad kala go'an, ka dibna si adag u laabi, adoo gelinaya hal saf. Isla mar ahaantaana, bishii hal mar ama wax ka badan, xasuuso inaad leexiso taayir kasta rubuc wareeg ah si aad u beddesho fulcrum ugana hortagto qallafsanaanta.
Liiska hubinta kaydinta saxda ah ee taayirada
Calaamadee goobta taayir kasta.
Taayirada ka nadiifi wasakh iyo dhagxaan.
Ku rid taayirada daboolka ama ku dabool bireed.
Hel meel UV ilaalinaysa.
Laabi taayirrada meel tuunsan ama kor u soo laal, taayirada si toos ah u dhig.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Sida saxda ah ee taayirada loo kaydiyo!